I-Terraforming ye-Mars. I-odyssey enkulu yobunjiniyela beplanethi | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Impucuko ye-Hypothetical ngemuva kwe-terraforming
Igama elithi "terraforming" ngumqondo ochaza izenzo zokuguqula iplanethi ukuze yenze kube nokuhlalwa. Ukwakheka komhlaba kwe-Mars yikho kanye lokho, inqubo yobunjiniyela beplanethi engasiza ekuguquleni isimo sezulu esikhona emhlabeni. Le nqubo ibizohlose ukukhuphula izinga lokushisa kweplanethi ebandayo nebandayo. Futhi ukudala isimo esivulekile, esizokunikeza umbono, yi-1% yalokho esinakho lapha, okungukuthi, singasho ukuthi akunakho. Futhi-ke, dala imifula, ebinomoya-mpilo, ukuthi bekukhona izitshalo, izihlahla, izilwane… okuphelele, lokho bekuyinto esondele kakhulu eMhlabeni.
Ososayensi abaningi (nabanye ababonayo) banikeze iziphakamiso zendlela yokufeza le nqubo. Kungabonakala kulula, kepha uma ukubonisana kahle nakho, akulula kangako. Njengomphumela wokutholwe kwakamuva, ukuthi amabhlogo amakhulu eqhwa kanye nokuthi kungenzeka ukuthi amanzi angaphansi kwawo, kukhuthaze kakhulu imimoya ukuthi isakaze umhlaba. Ngu I-NASA, nezinye izinkampani, sezivele zenze iziphakamiso ngephrofayili yabantu abazoya lapho ukuqala le nqubo yokuvelela. Uhambo lokuya kuphela, kodwa hhayi ukubuyela, esingaqala ukulubona, eminyakeni eyishumi ezayo. Kodwa-ke, ukulungiswa kabusha kweplanethi akuyona into elula, futhi kuthi lapho kuzanywa ukuyiguqula, kutholakale izinto lapho ochwepheshe abaningi beziphakamiso zabo bengazange babhekelele ekuqaleni.
1 Dala isimo sezulu nomoya ku-Mars
2 Inqubo yokuthola amanzi
3 Inqubo yokuthola umoya-mpilo
Dala isimo sezulu nomoya ku-Mars
Isithombe seMars kusuka emkhathini
Amanzi awakwazi ukuba khona esimweni soketshezi. Njengamanje iMars yiplanethi enezinga lomfutho womoya omubi kakhulu, ngokulandelana kuka-0,005, ethatha uMhlaba njengesethenjwa, 1. Kumele futhi sibale izinga lokushisa, Emhlabeni cishe ngo-15ºC, kwi-Mars, yize engekho amarekhodi amaningi anele ukuthola ukunemba okulungile, singasho ukuthi kuphakathi kuka -40 / -70ºC. Kunamarekhodi ahlukahluka kakhulu, njengomehluko phakathi kokuphakeme nobuncane okutholwe yizinqubo zeViking, umuntu ofudumele ongu -13ºC futhi obandayo ongu -89ºC. Womabili la marekhodi angadlulwa ngomehluko omkhulu ngokuya ngephuzu kwiplanethi lapho kulinganiswa khona.
Ukuthola amanzi, bekungeke kwanele ukwengeza nje izinga lokushisaNjengoba inengcindezi ephansi kangako, ingaba khona kuphela esimweni segesi noma esiqinile. Okwakho, kumele sikhuphule ingcindezi ngaphezu kuka-0,006. Ngcindezelo ephezulu ngokwanele yomkhathi kanye nezinga lokushisa eliphakeme emhlabeni, enye yezinsika eziyisisekelo zeTerraforming ngabe yaxazululwa. Kepha ... Ungayithola kanjani ingcindezi namazinga okushisa ukuze ande?
Inqubo yokuthola amanzi
Umdwebo wesigaba samanzi
Sabemos que sidinga ukukhuphula ingcindezi, ukukhuphula izinga lokushisa, futhi konke lokhu ukuze sizuze namanzi. Enye yezindlela ezithakazelisa kakhulu zokufeza zonke izinto ukuqhumisa izigxobo. Ngokuwaqhumisa ngamabhomu, iqhwa lingakhuphula ama-degree, ingxenye ye-CO2 izonciphisa. I-Sublimate isho ukusuka kokuqinile kuya kwegesi. Lokhu kungadala ukwanda kwe-CO2 emkhathini, okungakhuphula ingcindezi yasemkhathini ifike ku-0,3. Njengoba ukwazi ukubona kulo mdwebo, iMars isendaweni engu-A. Indawo ebizwa ngokuthi iphuzu eliphindwe kathathu, B, yindawo lapho singaqala khona ukuthola amanzi. Iphoyinti C kungaba iphuzu lapho kufanele sifike khona.
Enye yezinhlobo ezihlongozwayo zokuqhunyiswa kwamabhomu nayo ivele emlonyeni ka-Ellon Musk, owaziwa ngokuba ngumnikazi wezinkampani eziningana, kufaka phakathi iTesla edumile noma i-Space-X. U-Ellon musk kuhlongozwe isikhashana esedlule, ukuqhuma ngamabhomu enuzi. Umbono ongaqedi, kepha lowo ophishekela okulandelayo. Ukusabela kwamaketanga okulandelwa ngemuva kokukhishwa kwe-CO2 kwifomu enegesi ukuthi ingcindezi iyanda, lokhu kwandisa izinga lokushisa, okwandisa ukukhishwa okungaphezulu kwe-CO2, okwenza ingcindezi inyuke futhi, njll. indlela, sizothola inqubo enhle yokuphendula.
Inqubo yokuthola umoya-mpilo
Lapho iqhwa seliguqulwe laba ngamanzi, besizoba nomoya owakhiwe kakhulu yi-carbon dioxide nomhwamuko wamanzi, kepha oswele i-oxygen. Umqondo lapha kungaba ukuthutha i-phytoplankton eMhlabeni. I-Phytoplankton inikezela iplanethi yethu ngaphezu kwe-50% yomoya-mpilo esiwuphefumulayo. Ngale ndlela singakha umoya-mpilo, futhi sizuze umoya ophefumula kakhudlwana.
Yonke le nqubo yokuqala izothatha iminyaka eminingi. Njengoba sikwazile ukuqinisekisa, singafika eTerraform Mars. Abantu bokuqala iNASA ehlela ukubathumela kulindeleke ukuthi babe kusukela ngonyaka ka-2030. Kumele kuthiwe ezinye izinkampani zinesifiso sokuthi kuzoba kule minyaka eyishumi ezayo. Ezinye zazo, njenge-SPACE-X, seziqala ukuphakamisa amamodeli wendlela yokwenza lolu hambo lube ukonga futhi lusebenze kahle.
Izithombe | i.ytimg.com, nasa.gov, stefaniabertoldo.com, pulpenfantasi.blogspot.com.es
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » I-Terraforming yeMars